တွစ်တာ | October 2019
အယ်ဒီတာရဲ့ရွေးချယ်မှု October 15,2019
တွစ်တာ - ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း, တက်ကြွအင်တာနက်အသုံးပြုသူအများစုနာမည်ကျော်မိုက်ကရိုဘလော့ဂ်များဝန်ဆောင်မှုအတွက်မှတ်ပုံတင်ယခုအချိန်တွင်လာပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်အကြောင်းပြချက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာမျက်နှာဖွံ့ဖြိုးနှငျ့သငျကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အရင်းအမြစ်များမှအကျိုးစီးပွား၏တိပ်ခွေအချက်များကိုဖတ်ရှုဖို့ဆန္ဒအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုမရှိရင်အရမ်းတိုတောင်းပါတယ်ရင်တောင်လက်ရှိလူမှုကွန်ယက်စိတ်ကူးဖို့ခက်ခဲသည်။ နှင့် Twitter - အဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလူကြိုက်များသောမိုက်ကရိုဘလော့ဂ်များဝန်ဆောင်မှု2မိနစ် 20 စက္ကန့်ထက်မပိုသောအရှည်ရာ, သင်တိုတောင်းတဲ့ဗီဒီယိုကို upload တင်နှင့်ဝေမျှဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့န်ဆောင်မှုအပေါ်ဗီဒီယိုက "လောင်း" ။
တစ်ဦးက Twitter အကောင့်ကိုဖျက်ခြင်း
ဒါဟာ Twitter တွင်သင့်အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ အဆိုပါအကြောင်းရင်းမှာမိုက်ကရိုဘလော့ဂ်များဝန်ဆောင်မှုအပေါ်အချိန်ဖြုန်းနှင့်အခြားလူမှုကွန်ယက်နဲ့အလုပ်လုပ်အာရုံစိုက်ဖို့တစ်ဦးအလိုဆန္ဒတစ်ဦးလည်းကြီးမားသောဖြစ်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် motif, တန်ဖိုးများနှင့်အမရှိပါ။ အဓိကအရာက Twitter developer များကိုအပြဿနာများမရှိဘဲသင်၏ account ကိုဖျက်ပစ်ရန်ခွင့်ပြုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
တစ်ဖွဲ့လုံးကဝန်ဆောင်မှုခွင့်ပြုချက်စနစ်က Twitter ကိုမိုက်ကရိုဘလော့ဂ်များနေဆဲအခြားလူမှုရေးကွန်ယက်ဆိုဒ်များတွင်အသုံးပြုကြောင်းအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဝင်ပေါက်နှင့်အတူပြဿနာများ - မရှားပါးဖြစ်ရပ်ဆန်း။ ဤရွေ့ကား, များအတွက်အကြောင်းပြချက်ကအလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်။ ဒီက restore မှကြံ့ခိုင်ယန္တရားများရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်တွစ်တာအကောင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်များဆုံးရှုံးမှု, စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတွက်အလေးအနက်အကြောင်းမရှိဘူး။
သင့်ရဲ့ Twitter အကောင့်ထွက်ရဖို့ကိုဘယ်လို
အွန်လိုင်းမဆိုအကောင့်အတွက်သင်အမြဲကထွက်ရဖို့ဘယ်လိုသိသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သင်ရိုးရှင်းစွာအခြားအကောင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ချင်ရှိမရှိမပါကွာခြားချက်ရှိပါသည်။ အဓိကအရာက Twitter ထွက်ခွာလျှင်မြန်လွယ်ကူဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူတဲ့အဖြစ်ဖြစ်စဉ်ကိုခွင့်ပြုခြင်းပယ်မည်တွစ်တာမှာမဆိုပလက်ဖောင်းပေါ်က Twitter ကနေချန်ထားပါ။
အဘယ်သူသည် Twitter ပေါ်တွင်လူကြိုက်များဖြစ်လာချင်ဘဲနေရသနည်း အာကာသသို့မက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါနဲ့သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအပေါ်အဆက်မပြတ်များမှာမထားပါနဲ့။ ဒါပေမယ့်မိုက်ကရိုဘလော့ဂ်များဝန်ဆောင်မှုလျှင် - သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် key ကို tool ကို, သူ၏ Twitter-အကောင့်မြှင့်တင်သွားရပင်လိုအပ်ပေသည်။ ဤဆောင်းပါး၌, ကျွန်တော်တစ်ဦးက Twitter မြှင့်တင်ရန်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်နည်းလမ်းများသည်၎င်း၏လူကြိုက်များသေချာနိုငျပုံကိုဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၏ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်နှင့်အချိန်တွေအများကြီးဖြုန်းခြင်းမရှိဘဲ, စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများတက်အတိုင်းလိုက်နာရန်ခွင့်ပြုသည်အတိုင်းလူမှုကွန်ယက် Twitter မှာ, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အသုံးပြုသူများသည်အကြားအတော်လေးရေပန်းစားသည်။ default website နှင့်တစ်ဦးကို client application အဖြစ်ကို default operating system ကိုထွက်မသတ်မှတ်နှင့် / သို့မဟုတ်ဒေသတွင်း၌အသုံးပြုပါသည်။
Twitter ပေါ်တွင် Retweet ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Retweet - ကမ္ဘာ၏အခြားလူများနှင့်အတူအတွေးအခေါ်များမျှဝေဖို့ရိုးရှင်းပြီးအလွန်ကြီးစွာသောလမ်း။ တွစ်တာ Retweet ခုနှစ်တွင် element တွေကို Full-စုံတဲ့အသုံးပြုသူတိပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ရုတ်တရက်ဒီလိုမျိုးတစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုစာပေဖယ်ရှားပစ်ရမယ့်လိုအပ်ချက်အဘယျသို့လြှငျအရှိခဲ့သလဲ ထိုကိစ္စတွင်ခုနှစ်, လူကြိုက်များမိုက်ကရိုဘလော့ဂ်များဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုသက်ဆိုင်တဲ့ function ကိုရှိပါတယ်။
သင်ထင်သင့်ရဲ့ user name ကို သာ. နှစ်သက်သည်သို့မဟုတ်ရုံအနည်းငယ် update ကိုသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုလိုလျှင်, ထိုအမည်ပြောင်ကိုပြောင်းလဲရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သင်အလိုရှိသကဲ့သို့သင်တို့ကြောင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာသင်အလိုရှိသည့်အခါ "@" ခွေးပြီးနောက်အမည်အားပြောင်းလဲပစ်နဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ developer များစိတ်ထဲမထားပါဘူး။ Twitter ပေါ်တွင်အသုံးပြုသူနာမ၌ပြောင်းလဲမှုများအတွက်ဆပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး - ငါဘယ်လိုဖော်ပြရကျိုးနပ်တွစ်တာပထမဦးဆုံးအရာတွင်နာမည်ကိုပြောင်းကြဘူး။
အဆိုပါမိုက်ကရိုဘလော့ဂ်များဝန်ဆောင်မှုတွစ်တာ၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများကို - သငျ, tweets နှင့်နောက်လိုက်များသိကြသည့်အတိုင်း။ တစ်ဦးကဦးဆောင်အားလုံး - လူမှုရေးအစိတ်အပိုင်း။ သငျသညျ, မိတ်ဆွေများကိုရှာဖွေသတင်းကိုစောင့်ကြည့်ကြပြီးတက်ကြွစွာအချို့အကြောင်းအရာများ၏ဆွေးနွေးမှုတွင်ပါဝင်။ နှင့်အပြန်အလှန် - သင်သတိထားမိနှင့်သင့်ထုတ်ဝေတုံ့ပြန်ကြသည်။ သင်တို့မူကားရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကလူကိုရှာဖွေတွစ်တာမှမိတ်ဆွေများကို add ဖို့ဘယ်လို?
နီးပါးတိုင်းလူကြိုက်များလူမှုကွန်ယက်အခုအချိန်မှာအဲဒီမှာသင့်အကောင့်မှငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်, နှင့် Twitter - အဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းမှာမိုက်ကရိုဘလော့ဂ်များဝန်ဆောင်မှုအတွက်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဘဏ္ဍာရေးပြန်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။ Twitter ပေါ်တွင်ငွေရှာဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ, ဤအသုံးပြုရန်, သင်သည်ဤပစ္စည်းကနေလေ့လာသင်ယူမည်ကိုကြားလိုက်ပါ၏။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: ဘယ်လိုပထမတစ်ခုကတွစ်တာအကောင့်နည်းလမ်းများတွစ်တာ-အကောင့်ငွေရှာခြင်းအတွက်ဖန်တီးပေးရန်, ငါတို့ဝင်ငွေတစ်ခုအပိုဆောင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်တွစ်တာများအတွက်ဝင်ငွေရရှိမှုကိုပိုသင့်လျော်ကြောင်းသတိပြုပါ။
သငျသညျစရိုက်တို့၏အကြံအစည်စိတ်ဝင်စားလျှင်သင်တို့အဘို့အက, ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုမိလိမ့်ရန်ဤသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး, ကျော်ကြားနှင့်မအရေးကြီးပါတယ်လျှင်, သင်ရုံသင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်အခြားသူများနှင့်ဆွေးနွေးလိုလျှင်, Twitter ကို - ဤအဘို့အသင့်တော်ဆုံး ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ သို့သော်ဤဝန်ဆောင်မှုနှင့်မည်သို့တွစ်တာသုံးစွဲဖို့ကဘာလဲ?
တွစ်တာပေါ်မှာရှိသမျှ tweets ကလစ်၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုဖျက်မည်
လုံးဝတွစ်တာတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပေါ်ပေါက်စေခြင်းငှါ၎င်းတိပ်ပမြေားကိုဆေးကြောသန့်စင်ရန်လိုအပ်ပါဘူး။ ဤအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကွဲပြားပေမယ့်တဦးတည်းပြဿနာ - ဝန်ဆောင်မှု developer များအားလုံး tweets ကလစ်၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုဖယ်ရှားနိုင်စွမ်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုမပေးပါဘူး။ လုံးဝတိပ်ဆေးကြောသန့်စင်ဖို့, စနစ်တကျတဦးတည်းထုတ်ဝေခြင်းဖြင့်တဦးတည်းကိုဖယ်ရှားခဲ့ကြသည်။